Policy Iwu Kuki
Otu ụzọ ị si anakọta ozi bụ site n'iji teknụzụ akpọrọ "kuki." Gbanye goluego.com , a na-eji kuki maka ihe dị iche iche.
A “kuki” bụ obere ego nke ederede na-echekwara na ihe nchọgharị gị na (dị ka Google Chrome ma ọ bụ Apple si Safari) mgbe ị na-agagharị na kasị weebụsaịtị.
Kedu ozi kuki na-echekwa?
Kuki anaghị echekwa ozi dị nro banyere gị, dị ka kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nkọwa ụlọ akụ, foto ma ọ bụ ozi nkeonwe, wdg. Data ha debere bụ teknụzụ, ọnụ ọgụgụ, mmasị onwe onye, ​​ịhazi ọdịnaya, wdg.
Sava weebụ anaghị ejikọta gị dị ka mmadụ kama ọ bụ ihe nchọgharị weebụ gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-agagharị na ihe nchọgharị Chrome ma gbalịa iji otu nchọgharị Firefox na-agagharị na otu weebụsaịtị, ị ga-ahụ na weebụsaịtị ahụ anaghị achọpụta na ị bụ otu onye n'ihi na ọ na-esonyere ozi ahụ na ihe nchọgharị ahụ, ọ bụghị na mmadụ.
Kedu ụdị kuki n'ebe ahụ?
Nka na ụzụ kuki: Ha bụ ihe kachasị ma nye ohere, n'etiti ihe ndị ọzọ, ịmara mgbe mmadụ ma ọ bụ ngwa akpaaka na-eme nchọgharị, mgbe onye ọrụ na-enweghị aha na onye ọrụ edebanyere aha na-eme nchọgharị, ọrụ ndị bụ isi maka arụmọrụ nke weebụsaịtị ọ bụla dị ike.
Kuki nyocha: Ha na-anakọta ozi banyere ụdị igodo ị na-eme, ngalaba ị na-ejikarị, ngwaahịa ndị a na-enyocha, oge ojiji, asụsụ, wdg.
Kuki mgbasa ozi: Ha na-egosi mgbasa ozi dabere na nchọgharị gị, obodo gị, asụsụ, wdg.
Kedu ihe nwere kuki nke ndị ọzọ?
Kuki nke gị bụ ndị nke ibe ị na-eleta bụ nke ndị ọzọ bụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ dị ka Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense mepụtara.
Kedu kuki nke weebụsaịtị a na-eji?
Weebụsaịtị a na-eji kuki ya na nke atọ. A na-eji kuki ndị a na weebụsaịtị a, nke akọwapụtara n'okpuru:
Kuki nke gị bụ ndị a:
Nhazi Kuki na-enyere anyị aka icheta ndị mmadụ ma ọ bụ weebụsaịtị ị na-emekọrịta, nke mere na ọ nwere ike igosi gị ọdịnaya metụtara ya.
Mmasị: Kuki na-enye m ohere icheta ntọala na mmasị gị, dị ka asụsụ kachasị amasị gị na ntọala nzuzo gị.
Nchebe: Anyị na-eji kuki iji zere ihe ize ndụ nchebe. Tumadi ịchọpụta mgbe mmadụ na-agbalị mbanye anataghị ikike n'ime akaụntụ gị goluego.com.
Kuki ndị ọzọ:
Weebụsaịtị a na-eji ọrụ nyocha, kpọmkwem, Google Analytics iji nyere aka webụsaịtị nyochaa ọrụ ndị ọrụ webụsaịtị ahụ mere wee melite ọrụ ya, mana agbanyeghị na ha metụtara data nwere ike ịmata onye ọrụ ahụ. Nchịkọta Google, bụ ọrụ nchịkọta weebụ nke Google, Inc. nyere, Onye ọrụ nwere ike ịkpọ ebe a ụdị kuki nke Google jiri.
goluego.com bụ onye ọrụ nke ọkọnọ na mba n'elu ikpo okwu nke Blọọgụ WordPress, ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ North American ụlọ ọrụ Automattic, Inc. Maka ebumnuche a, ojiji nke kuki ndị dị otú ahụ site na sistemụ anaghị adị n'okpuru njikwa ma ọ bụ njikwa nke onye na-elekọta weebụ, ha nwere ike ịgbanwe ọrụ ha n'oge ọ bụla, ma banye kuki ọhụrụ. Kuki ndị a anaghị agwa onye ọrụ maka weebụsaịtị a uru ọ bụla. Automattic, Inc., na-ejikwa kuki ndị ọzọ iji nyere aka chọpụta ma soro ndị ọbịa gaa na saịtị nke WordPress, mara ihe ha na-eme na ebe nrụọrụ weebụ Automattic, yana ohere ha nwere mmasị na ya, dị ka ekwuru na "Kuki" nke iwu nzuzo ha.
Enwere ike ịchekwa kuki na-elekọta mmadụ media na ihe nchọgharị gị mgbe ị na-eme nchọgharị goluego.com Dịka ọmụmaatụ, mgbe iji bọtịnụ kesaa ọdịnaya site na goluego.com na ụfọdụ na-elekọta mmadụ na netwọk.
N’okpuru ị nwere ozi gbasara kuki nke netwọkụ mmekọrịta nke webụsaịtị a na-eji atumatu kuki ya:
Facebook kuki, lee ozi ndị ọzọ na gị iwu kuki
Youtube kuki, lee ozi ndị ọzọ na gị iwu kuki
Kuki Twitter, lee ozi ndị ọzọ na gị iwu kuki
Kuki Pinterest, lee ozi ndị ọzọ na gị iwu kuki
Mgbe ụfọdụ anyị na-eme arụmọrụ omumearkna-eri Google AdWords, nke na-eji kuki iji nyere aka nyefee mgbasa ozi ịntanetị ezubere iche dabere na nleta ndị gara aga na weebụsaịtị a. Google na-eji ozi a iji nye mgbasa ozi na weebụsaịtị dị iche iche nke ndị ọzọ na Internetntanetị. Biko gaa na Nkwupụta Nzuzo Mgbasa Ozi Google maka ozi ndi ozo.
Mgbe ụfọdụ anyị na-eme arụmọrụ omumearkna-eri Facebook mgbasa ozi, nke na-eji kuki iji nyere aka nyefee mgbasa ozi ịntanetị ezubere iche dabere na nleta ndị gara aga na weebụsaịtị a.
Na weebụsaịtị a anyị na-eji kuki mgbasa ozi, nke na-enye anyị ohere ịhazi mgbasa ozi maka gị, anyị (na ndị ọzọ) nweta ozi gbasara nsonaazụ mkpọsa ahụ. Nke a mere na-adabere na profaịlụ nke anyị ji clicks gị na igodo gị wee banye na nke ọpụpụ goluego.com. Na kuki ndị a, gị, dị ka onye ọbịa webụsaịtị, jikọtara ya na NJ pụrụ iche, yabụ na ị gaghị ahụ otu mgbasa ozi ahụ karịa otu oge, dịka ọmụmaatụ.
Anyị na-eji Google Ads maka mgbasa ozi. Gụkwuo.
Kuki ọnụ ọgụgụ
Anyị na-eji kuki ọnụ ọgụgụ iji bulie ahụmịhe weebụ maka ndị ọrụ anyị. Site na kuki ndị a ọnụ ọgụgụ anyị na-enweta ihe ọmụma banyere iji weebụsaịtị anyị. Anyị na-arịọ maka ikike gị itinye kuki ọnụ ọgụgụ.
Kuki site na marketing / nsuso
Kuki site na marketing / nsuso bụ kuki, ma ọ bụ ụdị nchekwa ọ bụla ọzọ, ejiri mepụta profaịlụ onye ọrụ iji gosipụta mgbasa ozi ma ọ bụ soro onye ọrụ na weebụsaịtị a ma ọ bụ n'ọtụtụ weebụsaịtị maka ebumnuche marketing yiri.
N'ihi na akara kuki ndị a ka akara nsuso kuki, anyị na-arịọ ka ikike gị tinye ha.
Nwere ike ihichapụ kuki?
Ihichapụ kuki site na weebụsaịtị, ị ga-aga na ntọala ihe nchọgharị gị na ebe ị nwere ike ịchọ ndị metụtara ngalaba ahụ na-ekwu ma gaa n'ihu ihichapụ ha.
Ntọala kuki maka Google Chrome
Ntọala kuki maka Apple Safari
Ntọala kuki maka internet Explorer
Ntọala kuki maka Mozilla Firefox
Nwere ike ịkpọ ụkpụrụ nke kuki ndị Agencylọ Ọrụ Spanish maka Nchedo Data bipụtara na "Ntuziaka maka ojiji kuki" ma nweta ozi ndị ọzọ gbasara kuki na ,ntanetị, Banyere
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ijikwa nrụnye nke kuki, ịnwere ike ịwụnye mmemme ma ọ bụ tinye-na ihe nchọgharị gị, nke a maara dị ka ngwaọrụ “Esona”, nke ga-enye gị ohere ịhọrọ kuki ịchọrọ ịhapụ.
Ikike gị gbasara data nkeonwe
Ikike nke ịnweta: ị nwere ikike ịnweta data nkeonwe gị anyị maara.
Ikike imezi: ị nwere ikike iji mezue, dozie, hichapụ ma ọ bụ gbochie data nkeonwe gị mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ọ bụrụ n’inye anyị nkwenye gị iji hazie data gị, ị nwere ikike ịkagbu nkwenye ahụ yana ka ehichapụ data nkeonwe gị.
Ikike ịnyefe data gị: ị nwere ikike ịrịọ data nkeonwe gị n'aka onye na-ahụ maka ọgwụgwọ na ịnyefe ha n'ụzọ zuru ezu nye onye ọzọ na-ahụ maka ọgwụgwọ ahụ.
Ikike nke mmegide: ị nwere ike imegide nhazi nke data gị. Anyị na-agbaso nke a, belụsọ ma enwere ezi ihe kpatara nhazi.
Iji gosi ikike ndị a, biko kpọtụrụ anyị. Biko lee nkọwa kọntaktị na ala nke iwu kuki a. Ọ bụrụ na ị nwere mkpesa banyere otu anyị si ejikwa data gị, anyị ga-achọ ka ị mee ka anyị mata, mana ị nwekwara ikike iji akwụkwọ mkpesa nye ndị na-ahụ maka nlekọta (ikike nchekwa data).
Ebugharị, deactivation na mkpochapụ kuki
Nwere ike iji ihe nchọgharị Internetntanetị ihichapụ kuki na-akpaghị aka ma ọ bụ aka. I nwekwara ike ikwuputa na etinyeghi kuki ufodu. Nhọrọ ọzọ bụ ịgbanwe ntọala nke ihe nchọgharị Internetntanetị gị ka ị nweta ozi oge ọ bụla etinye kuki. Maka ozi ndị ọzọ gbasara nhọrọ ndị a, gụọ ntuziaka na ngalaba "Enyemaka" nke ihe nchọgharị gị.
Biko rịba ama na weebụsaịtị anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na kuki niile nwere nkwarụ. Ọ bụrụ na ihichapụ kuki site na ihe nchọgharị gị, a ga-etinye ha ọzọ mgbe ị kwenyechara gị mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị ọzọ.
Detorles de contacto
Email: kọntaktị goluego@gmail.com
N'okpuru iwu: a na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ ugbu a maka kuki maka oge mbụ.